Khin Maung Chin: ဘလော့မှာFaviconထည့်နည်းတမျိုး
24 August 2011 7:45 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
ထည့်ရမလဲလို့မေးလာတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးလိုက်တာမို့ သိပြီးသားမိတ်ဆွေများခွင့်လွှတ်ပေးကြပါကုန်..:Pကျနော်ရည်ရွယ်လိုက်တဲ့မိတ်ဆွေ
ပိုင်လို့နည်းပညာဘလော့ဂါမလုပ်တာပါ.....:Pအဲဒီလိုပြောလို့ခုရေးနေတာတွေကရော ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရေးနေတာလားလို့မေးလာခဲ့ ရင်လည်း ဟီးဟီး ဆိုပြီးသွားပဲဖြဲပြပါရစေ။ ဒါဆိုသဘောပေါက်လောက်ပါပြီနော်)မေးလ်မထားခဲ့ပဲစီဘောက်ကနေရှင်းပြဖို့ဆိုတာ ကလည်းမဖြစ်နိုင်၊ပို့စ်တစ်ခုအဖြစ်တင်ပြီးပြောပြဖို့ဆိုတာကလည်းမလုပ်ချင်...........။
ပထမဆုံးကိုယ့်ဘလော့မှာကိုယ်ထားချင်တဲ့ Icon လေးကိုရွေးချယ်ထားရမှာပါနော်။ Iconလေးတွေကိုဘယ်လိုရှာရမှာလည်းလို့မေးချင်မေးလာနိုင်လို့ ကြိုဖြေလိုက်ပါပြီ...။ ဒီလင့်လေးကို သွားကြည့်လိုက်ပါ။လိုချင်သလိုလုပ်ယူချင်သလား၊လုပ်ပြီးသားအဆင်သင့် ယူသုံးမလား..အားလုံးရပါတယ်..။ ကြိုက်တာတွေ့ရင်သိမ်းမယ်...ပြီးတာနဲ့ Blogger.comကိုဝင်လိုက်ပါ။ ဝင်ပြီးရင်တော့ Design ဆိုတာကိုဝင်လိုက်ရင် Page Elements ဆိုတာကိုတွေ့မှာပါ။ တွေ့ပြီဆိုရင်အောက်က
ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးလုပ်သွားလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ဘလော့လေးရဲ့ Favicon လေးတွေပြောင်းသွားပြီပေါ့ဗျာ...။ အဲဒီလိုမှအဆင်မပြေရင်နောက်နည်းတွေကတော့ ကျနော်သွားဖတ်နေကျ၊ နည်းပညာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ ဒီနေရာကို သွားလေ့လာလိုက်ပါဗျာ....။ သဘောကောင်းမနောကောင်းတဲ့မိသားစုလေးရဲ့ ရက်ရက်ရောရောပညာပေးထားတာတွေကိုတွေ့ရမှာပါ..။ အဆင်ပြေပါစေ..။ နောက်ဆိုကျနော့်ဘလော့လေးပေါ်က နည်းပညာအကူအညီဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာမိတ်ဆွေတို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာ ဘလော့ဂါတွေဆီသွားရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်..။ ကျနော်ကပညာသမားမဟုတ်လို့လျော့နည်းပြီးမပြည့်စုံမှာသေချာတာမို့ တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေဆီသွားဖို့ ဒုတိယမ္မိတိုက်တွန်းအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ....။ အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ..။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ နည်းပညာဆိုင်ရာများ 10 ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Aug 25, 2011, 12:12:00 AM
Thank you for the useful info. I wonder also what is Favicon :)
Aug 25, 2011, 4:17:00 AM
အစ်ကိုချင်း... link လေး share တာ ကျေးဇူး.. :D
Aug 25, 2011, 8:55:00 AM
နည်းပညာလေးတွေ လေ့လာမှတ်သားသွားတယ် ချင်းကလေးရေ။ တခြားအကြောင်းအရာလေးတွေ ရေးတာလည်း ဖတ်ကောင်းပါတယ်။ ရှက်စရာမှမဟုတ်တာကွယ်။
Aug 25, 2011, 10:21:00 AM
@You are Wellcome Rose. @ညီမကန်ဒီ..ကျေးဇူးစကားပြောစရာမလိုဘူးလေ...နော်?:) @ဟုတ်ကဲ့အန်တီ..ခုလိုအန်တီအားပေးတာကိုတော့ထာဝရသတိရနေမှာပါဗျာ.
Aug 25, 2011, 12:58:00 PM
ညီမဘလော့မှာ read more ဆိုတာလေး
အစ်မလုပ်တာအဆင်မပြေလို့ :P )
Aug 25, 2011, 5:42:00 PM
ဒီလင့်လေးမှာအစ်မသိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးရေးထားပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲဒီအတိုင်းလုပ်လိုက်တာပါပဲဗျာ.။ရပါတယ်။ အစ်မလည်းအဆင်ပြေမှာပါနော်.မပြေတော့လည်းပြန်ပြောပေါ့ဗျာ..။
အောက်ကအစားထိုးသွင်းရမယ့်ကုဒ်တွေထဲကဆက်ဖတ်ရန် ဆိုတဲ့စာသားနေရာမှာအစ်မကြိုက်သလိုပြောင်းရေးလို့ရပါတယ်။ အစ်မအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းလျက်ပါနော်။
Aug 25, 2011, 6:45:00 PM
Aug 25, 2011, 10:11:00 PM
Aug 27, 2011, 9:39:00 AM
read more တော့ဖြစ်တယ်
Aug 27, 2011, 11:46:00 AM